interviews - The #rebelsenator - .LA
BBC: "GenoMe (Generation Mobile) Joshua Chit Tun Campaigns for U.S. Senate"
Published by Chairman Brian Antezana on April 24, 2016 at 11:49pm in In the News
Find out more why Joshua Chit Tun chose to campaign to becomeaU.S. Senator, how he grew up, his character, and his connection to Burma by listening to the Joshua Chit Tun GenoMe Program above.
BBC: "မိုဘီဂြီနို နဲ့ ဆီးနိတျအမတျဖွဈခငျြသူ"
Published by Chairman Brian Antezana on April 24, 2016 at 6:21pm in Highlights (In Burmese)
မိုဘီဂြီနို အစီအစဉျကနေ ကွိုဆိုပါတယျ။ ဒီတဈပတျမှာတော့ အမရေိကနျနိုငျငံ ကယျလီဖိုးနီးယား ပွညျနယျကနေ ဆီးနိတျ အထကျလှတျတျောအမတျဖွဈဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ မွနျမာပွညျဖှား အမရေိကနျလူငယျတဈဦး အကွောငျး တငျဆကျပေးထားပါတယျ။
လက်ရှိမှာ ကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားတဲ့ Brain Child Creative Group, မှာပါဝင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံတဲ့ အဆင့်တွေကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး အခုကတော့ အကူးအပြောင်းအဆင့်ကို ရောက်နေပါပြီ သူရ
I believe that STUDENTdirect International will be strategic in the efforts ofabetter Burma, and it will not end there as STUDENTdirect will fight for democracy as long as there are young people willing to get organized, who are ready to take on th
Published by Chairman Brian Antezana on March 29, 2016 at 3:32am in In the News
What are you doing at present? I am currently involved withacompany into which I invested, Brain Child Creative Group. It is going through its early investment stages, but, in its transition, I have become C.E.O. of its subsidiaries such as Boogie
၁။ မြန်မာပြည် မှ ကလေးတစ်ယောက် မွေးစားမယ့် အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ် အဲဒီအစီအစဉ်အသေးစိတ်ကို သိချင်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်မို့ အဲဒီလိုလုပ်ချင်ရတာပါလဲ ။ အကယ်၍ မွေးစားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ကလေးမျိ
Recently, the journal of တငျထှနျးဦး (Tin Tun Oo), Pyi Myanmar, conducted an interview with Joshua Chit Tun, the young Myanmar American who has his eyes on the US Senate.